मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमा कसरि घट्यो यस्तो घटना ? के भन्छिन खानेपानी मन्त्री बिना मगर — Imandarmedia.com
मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमा कसरि घट्यो यस्तो घटना ? के भन्छिन खानेपानी मन्त्री बिना मगर
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा परीक्षणको लागि छाडिएको पानीमा दुई जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा हेलम्बु गाउँपालिका-१ स्थित सुरुङमा आयोजनाका एक जना इन्जिनियर र चालक रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सुरूङको एक ठाउँबाट एक्कासी पानी बाहिर आएपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न गएका उनीहरुलाई पानीले बगाएर बेपत्ता बनाएको हो । परीक्षणका लागि हाल सुरुङमा पानी हालिएको छ ।
यसअघि पानी सुरुङमा पानीले बगाएर ४ जना बेपत्ता भएका थिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरुमध्ये २ जनाको जीवितै उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको र दुई जनाको भने खोजी कार्य भइरहेको छ । यसैबीच बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका पाँच दिनमा मात्रै ७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन् ।
रौतहटमा डुबानका कारण ५ सय घरपरिवार विस्थापित हुँदा करिब २ हजार ५ सय व्यक्तिलाई अन्यत्र सारिएको हो । यस्तै, सप्तरीमा ३२ परिवार विस्थापित भएका छन् । संखुवासभामा ८२ घरपरिवारका ४ सय बढी व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सरिएको छ ।
यसैगरी, लमजुङमा १० घर परिवारका ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । जाजरकोटमा २ सय ६ घर परिवारका १ हजार बढी व्यक्तिलाई अन्यत्र लगिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा ८५ घर परिवारलाई पहिराका कारण बसोबार रहँदै आएको स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
यस्तै, म्याग्दीमा ४ सय परिवारलाई जोखिम हेरेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । तराईमा बाढी तथा डुबानका कारण र पहाडमा पहिराका कारण धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित जिल्लाहरूमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, रेडक्रससहितका संघसंस्थाको समन्वयमा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
उनका अनुसार नजिकैका क्षेत्रीय गोदामघर तथा जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रभावित जिल्लामा राहत सामग्री पुर्‍याइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २५ असारअघि बझाङ, पर्वत, गुल्मी र पाल्पामा भएका विपद्का घटनाबाट हजारौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा रहेका प्रहरी, स्थनीय संघसंस्था तथा रेडक्रसमार्फत विस्थापितको यकिन विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्नेमा पहिरो खस्दा मंगलबार बिहानैदेखि यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
पहिरोसँगै खसेको रूखले बा१४च ७०२० नम्बरको कार र ना६ख १५५९ नम्बरको ट्रक च्यापिएका छन् । मानवीय क्षति भने भएको छैन । सडक विभाग र प्रहरीले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डीएसपी मोहनबहादुर खाँडले बताए ।
सडक अवरुद्ध हुँदा मालवाहक ट्रक र निजी सवारी रातिदेखि दाउन्ने डाँडामै रोकिएका छन् । प्रहरीका अनुसार बाटो खुलाउने प्रयास भइरहे पनि वर्षाका कारण पहिरो थामिएको छैन । राजमार्गअन्तर्गत दाउन्ने खण्डको १५ किलोमिटर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ससाना पहिरो खसिरहेका छन् ।